လေ့လာရန်၊ မှတ်သားရန်၊ လိုက်နာရန်
Vichan Chaichan | Create Your Badge
My ArtsPromote Your Page Too
မေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကွာချမ်းသာနိုင်ပါစေမေတ္တာနှလုံး အစဉ်သုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေမေတ္တာရန်သူ ဒေါသမူအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေချမ်း ကိုယ်စီဖြန်းအေးချမ်းနိုင်ပါစေခန္တီနှလုံး အစဉ်သုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေခန္တီ၏ရန် ဒေါသမာန်တွန်းလှန်နိုင်ပါစေတို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်းအေးချမ်းကြပါစေ
Uni Mon ဖောင့်ယူရန် Uni Mon Keyboard driver Uni Mon Keyboard Layout
MY OTHER WORLDPRESS
Visit Photographer Social Network
အိုင်တီ နှင့် နည်းပညာ လင့်များ
အိုင်တီ နှင့် နည်းပညာ - ရမ်းသမ်းမဲ့ခရီး
speed test -1
when green you can chat with me
Click Here Chat with me my email address is vichan00@gmail.com
နေ့စဉ်အလိုက် တင်ပြီးခဲ့သော ပိုစ့်များ
how to put cbox
Digital-Art & Photography
I Go To....
Bo Bo's Mogoke
Nwae Lay Yuu
Photographic Enthusiasts Group
NIKON Capture NX v.1.2 Rapidshare
NIKON Capture NX v.1.2 Easyshare
Lightroom v1.1 Media Fire Link
Lightroom v1.1 Rapidshare Link
This isaFlickr badge showing public photos from CHIT Oo- PHOTO. Make your own badge here.
Myanmar Bangkok Media
Friday, June 20, 2008ကျနော်နဲ့ Folder Options (ပျောက်ဆုံးခြင်း)ကျနော့်ကွန်ပြူတာမှာ Folder Options ပျောက်သွားလို့ ခဏလောက်တော့ ခေါင်းစားသွားရပါတယ်။ စဉ်းစားခန်းဖွင့်လိုက်သေးတယ်။ ဘယ်နဲ့ပျောက်သွားရတာပါလိမ့်။ Folder Option ဆိုတာကို မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒါမှမဟုတ် အများကိုမမြင်မတွေ့စေချင်တဲ့ file (or) folder များကို မြင်ကွင်းမှ ဖျောက်ထားခြင်း၊ မြင်ကွင်းပေါ်သို့ ပြန်ရောက်အောင် ပြန်ခေါ် ခြင်းတို့မှာ များသောအားဖြင့် အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ကျနော်လည်း file တစ်ချို့ကို ဖျောက်ထားမလို့ လုပ်မယ်အကြံမှာ Tools ထဲမှာ Folder Options ရှိမနေဘူး။ ဒါများ ခက်တာမှတ်လို့ Control panel ထဲကိုသွားမှာပေါ့။ ရော အဲဒါမှ ခက်ပြီး . . . Control panel ထဲမှာ လည်း မရှိဘူးဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? အဲဒီတော့ ကျနော့်ဆရာတွေအထဲက ကျနော်နဲ့အနီးဆုံးရှိနေတဲ့ ဆရာကိုမေးရတော့မှာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ကျနော့်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ google.com ဆီဝင်မေးလိုက်ရပါတယ်။Folder Options ပျောက်ဆုံးခြင်းဟာ ဗိုင်းရပ်စားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ကဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ Folder Options ကို ကျနော်တို့ ပြန်ခေါ် ကြရအောင် . . .အရင်ဆုံး Start ထဲက Run ဆီကိုသွားရပါမယ်။Run box ထွက်လာတဲ့အခါမှာ gpedit.msc ကိုရိုက်ပြီး ok ပေါ့။ကဲ ပေါ်လာတဲ့ box ထဲမှာမှ . . . .User Configuration -> Administrative Template -> Windows Components -> Windows Explorerအဲလို တစ်ဆင့်ပြီးဆင့်သွားလိုက်ပေါ့။ထွက်လာတဲ့ Box လေးထဲမှ Removes Folder Options menu from Tools menu ကိုရှာလိုက်ပြီး ၂ချက် ကလင့်လိုက်ပါ။ ထပ်ထွက်လာတဲ့ box ထဲက Disable ကိုရွေးလိုက်ပေ့ါ။ကဲ့ အဲဒါတွေအားလုံးပြီးရင်တော့ ကျနော်တို့ Control panel ထဲမှာရော Tools ထဲမှာပါ Folder Options ပြန်တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ . . .။ရေးသားသူ မော်စီ at 7:54 AM
Chat with chit oo
what are you interest ?????
Create Magazine Covers with your own picture
Free software and background ( For Edit )
Download Photomatixafree trial version
make funcard by ur own
How to do HDR image
Advance Shot photo
Basic Shot Photo
photo for design
MY .. PAGE & LINKS .
My Opera site
My Mon medial
My Mostphoto mail
check for visitor login photochitoo email
Name Card လုပ်မယ်။ ဖိုင်များသိမ်းရန်
ညီအစ်ကို Blogger တွေ
ခ ရဲ့ အနုပညာ
လာလည်သွားရင်ပြောပြခဲ့နော်..... I am so happy if you leave message here. Thz
Your Email Hereဓာတ်ပုံအသစ်တင်တိုင်းသင့်ဆီကို ပို့ပေးပါမည်။ချစ်ဦး
photogapher sale photos site
~ WWW.PHOTOCHITOO.COM ~ Start publishing @ 20-04-2008 ဓာတ်ပုံရောင်းပြီးပိုက်ဆံလိုခြင်ပါသလား....
Vichan Photographer's Albums and pictures | Mostphotos.com
selling your images online? Click here for more info!
~ ရောက်လာတယ်ဆို ပြောပြခဲ့ပါ။ ~ Just message me :)
အချိန်ရရင် လာလည်ပါ၊ ကြိုက်တာတွေရှာဖတ်သွားပါ၊ စိတ်ဝင်စားရင်တော့
*COMMENT ပေးခဲ့ပေါ့ (*အားဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ)၊ ဆွေးနွေး မေးဖြေ ချင်ရင်တော့ C ပုံးထဲမှာ တိုင်ပင်ကြတာပေါ့..အားလုံးကို အခင်အမင်မပျက်
လေးစား လှရက် ပါ။
love to be friend View my complete profile
If you Would Like to have my new photos when i post Please Enter your Email address Here :
ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာအသစ်တင်တိုင်း Email ပုိ့ပေးမယ်။ Email to me ခေါင်းစဉ်
Labels ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ့်ကြည့်လေ
activitycreationscultureCyclone Nargisdigital camerasFashionfree softwareGenaral-အထွေထွေgenerali paperinfarred photosLandscapelast model watchslast style mobile phonemany fontmon national dayMtvmy weddingmy cameramy dailyMy Sony DSLR-A200Wmy wifenaturenemonight lightOur Wedding DayOutdoorportraitsangklaburislide showspasunsettravelwhich camera are you likewildlifeကျွန်တော့်ရဲ့နေ့စဉ်ဓါတ်ပုံပညာဖွဲ့တည်ရာPty-Magazine");
+ zawgyi font + burmess font converter + write zawgyifont Download How They Help Peoples Click Follow Image